Chin'ono Oramba Ari Mutirongo Kusvika Musi wa 7 Nyamavhuvhu
Mutori wenhau ane mukurumbira, Hopewell Chin’ono, anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Chin’ono, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga musi wa31 Chikunguru, anzi adzoke kudare musi wa7 Nyamavhuvhu.
Vachipa mutongo wavo pachikumbiro chaChin’ono, mutongi wedare, VaNgoni Nduna, vati kana Chin’ono akapihwa mukana wekubhara mari yechibatiso anogona kuramba achikurudzira vanhu kuti varatidzire nechisimba achishandisa dandemutande rake reTwitter.
Vati veruzhinji havazovimbinematare kana akamuburitsa kuti atongwe achibva kumba nekuti izvi zvinogona kuisa hupenyu hweveruzhinji munjodzi sezvo zuva rekuratidzira racho risati rasvika.
Vati padandemutande rake reTwitter, Chin’ono akanyora kuti sarudzo pamwe nematare hazviunze shanduko munyika uye akaisa mashoko pa Twitter yake ekukurudzira kuti veruzhinji varatidzire nechisimba.
Gweta guru raChin’ono, Amai Beatrice Mtetwa, vanga vaudza dare kuti Chin’ono munhu ane kodzero yekupihwa wekubhadhara mari yechibatiso, asi VaNduna varamba kuzvitambira vakapa mutongo wanga wakurudzirwa nevachuchisi vwhurumende.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaDoug Coltart, vanyora paTwitter yavo kuti vachapikisa mudare repamusoro mutongo wapihwa Chin’ono wekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso
Chin’ono ari kuramba nyaya yaari kupomerwa achiti iye chake akangoburitsa mashoko ari kutaurwa nevarongi vekuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru, veTransform Zimbabwe.
Chin’ono akasungwa pamwe chete nemutungamiri weTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume.
VaNgarivhume, avo vari kupomerwa mhosva imwe chete naChin’ono, vakanyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi weChina uye nyaya yavo ichaenderera mberi musi wa14 Nyamavhuvhu.
Mune imwewo nyaya, meya veHarare, VaHebert Gomba, avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa hosifi yavo zvisiri pamutemo apo vanonzi vakanyora tsamba vachiti vamwe vanhu vapihwe masitendi, vanyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitirakuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba.
Mutongi wedare, Amai Bianca Makwande, vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kana vakabatwa nemhosva, VaGomba vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba.
Rimwe remagweta aVaGomba, VaHarrision Nkomo, vati chimwe chikonzero chaita kuti VaGomba vanyimwe mukana wekubvisa mari yechibatiso inyaya yekuti vanzi vanogona kukanganisa vafakazi.
VaNkomo vati vave kuenda kudare repamusoro kunotsvaga mutongo wekuti VaGomba vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Bato raVaGomba reMDC Alliance raratidza kusafara nemabatirwo akaitwa VaGomba pavakasungwa.
Mutauriri weMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vati havasi kufara zvachose nemasungirwo akaitwa VaGomba.
Vatiwo havakwanisi kutaura zvakawanda sezvo nyaya ichiri mumatare.
VaGomba vakasungwa nemusi weMuvhuro vakazounzwa kudare neChina.